Orinasa miodina sy mpamatsy CNC mora vidy | Ouzhan
Ny varahina dia firaka vita amin'ny varahina sy zinc. Izy io dia fitaovana mety tsara amin'ny famokarana faritra vita amin'ny milina CNC (ao anatin'izany ny faritra mihodina amin'ny CNC).
Ny varahina CNC mihodina manodina-miverina miovaova varahina faritra
Ny fihodinan'ny Brass CNC dia matetika ampiasaina hanodinana workpiece mihodina amin'ny fitaovana fihodinana. Drills, reamers, reamers, taps, maty ary fitaovana knurling dia azo ampiasaina amin'ny lathe ihany koa ho an'ny fanodinana mifanaraka amin'izany. Ny lathes dia ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny masinina, kapila, tanany ary sangan'asa hafa misy faritra mihodina. Izy ireo no karazan'entana fanodinana fitaovana lehibe indrindra amin'ny orinasa mpamokatra milina sy fanamboarana.
Tombony azo amin'ny faritra vita amin'ny vy Ouzhan varahina
- Fanoherana matanjaka.
- Fikojakojana tsara.
- Fahalefahana sy fanoherana ny harafesina, fandeferana kely, avo lenta.
- Hery matanjaka tsara, anti-harafesina.
- Ny fahamendrehan'ny famolavolana tsara dia mety hahatratra IT8 ～ IT6, ary ny fahamendrehan'ny faritra Ra dia mety hahatratra 1,6 ～ 0,8μm.
OEM manamboatra serivisy varahina - China Shanghai Ouzhan CNC mpanamboatra varahina
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny cnc miovaova marimaritra iraisana manodina faritra misy kalitao azo antoka sy azo ianteherana dia azo zahana. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana mahomby sy miasa dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny vatan'ny masinina. Ankoatr'izay, ny vokatra mihodina varahina CNC dia nanaraka fatratra ny fenitra manara-penitra ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana ho an'ny vokatra mihodina varahina CNC ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy izahay.
Fampiharana ny faritra mihodina varahina
Ny lathes dia ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny masinina, kapila, tanany ary sangan'asa hafa misy faritra mihodina. Izy ireo no karazan'entana fanodinana fitaovana lehibe indrindra amin'ny orinasa mpamokatra milina sy fanamboarana.
Tombontsoa amin'ny serivisy fanodinana varahina Ouzhan
- Ny vokatra vita amin'ny varahina vita amin'ny cnc rehetra dia iharan'ny fitsirihana kalitao henjana.
- Araka ny sary na ny santionany hanamboarana faritra mihodina varahina.
Previous: Faritra plastika fikosoham-bary
Manaraka: Varavarana mihodina varahina mihodina milina accessories milina
Namboarina vy mihodina vy karbaona ...